Kukuliphi ilizwe apho ungathenga khona i-iPhone X entsha ngexabiso lesivumelwano? | Iindaba zeGajethi
Kukuliphi ilizwe apho ungathenga khona i-iPhone X entsha ngexabiso lesivumelwano?
I-iPhone X ngoku isemthethweni emva kwenani elikhulu lokuvuza kunye namarhe ebesenzeka kwiinyanga ezidlulileyo. Ngelishwa asizukukwazi ukuyigcina kude kube ngu-Okthobha olandelayo we-27 kwaye asizukuyifumana ezandleni zethu kude kube ziintsuku ezimbalwa kamva. Ukulinda iseza kuba lide ukuze sikwazi ukuthatha ithuba lokuzibuza; Kukuliphi ilizwe apho ungathenga khona i-iPhone X entsha ngexabiso lesivumelwano?.
E-Spain ixabiso le-iPhone X entsha iya kuba yi-1.159 ye-euro yenguqulo ye-64 GB kunye ne-1.329 ye-euro yenguqulo ene-256 GB yokugcina kwangaphakathi. Nangona kunjalo, la maxabiso awafani kuwo onke amazwe, kwaye kwezinye iimeko anokuhluka kakhulu.
Ukugxila kumbuzo onika isihloko kweli nqaku, Sele sikuxelele ukuba akukho lizwe ehlabathini esinokuyithenga i-iPhone X entsha ngexabiso lokuphumelela, kodwa ngonciphiso olubalulekileyo. Umzekelo, ukuba siya eholideyini eUnited States, kwaye ngokukodwa esixekweni saseChicago, sinokufumana isiphelo esitsha seApple ngokuncitshiswa kwexabiso lama-273 eeuros.
Apha sikubonisa ifayile ye- Ixabiso eliza kuba nalo i-iPhone X entsha kumazwe aliqela ehlabathi;
I-USA (eChicago) 886
I-USA (eNew York) 908
I-USA (eLos Angeles) 910
ENew Zealand 1.094
EUnited Kingdom 1.107
Ukujonga ezi datha, ngaphandle kwamathandabuzo singagcina i-euro encinci ngokuthenga i-iPhone X entsha kwilizwe elinye okanye kwelinye.Kusasele iintsuku ezininzi ngaphambi kokuba sigcine isixhobo esitsha eCupertino, ke mhlawumbi ungachitha iholide yakho elandelayo eSwitzerland okanye eJapan uyokuthenga.
Ngaba ucinga ukuba kufanelekile ukuthenga i-iPhone X entsha kwamanye amazwe ngako konke oku kuthetha?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Kukuliphi ilizwe apho ungathenga khona i-iPhone X entsha ngexabiso lesivumelwano?
Ndicinga ukuba kuya kufuneka ubonise ukuba isiqinisekiso sisebenza kuphela apho uthenga i-iPhone, oko kukuthi, ukuba uyithenga e-US, isiqinisekiso asisebenzi eSpain.
Iindleko zeArmand sitsho
Phendula kwiindleko zeArmand
Olu luchwephesha kuWhatsApp oluya kuthi lubiwe idatha yakho
I-Acer Apire S24, yeyona nto intle kakhulu kuyo yonke into kwiNtengiso